I-mineral garnet mineral lilungu leqela le-garnet - ividiyo
tags garnet, Ingqangi
I-mineral pyrope ilungu leqela le-garnet. Lilungu kuphela losapho lwe-garnet ukuhlala ubonakalisa umbala obomvu kwiisampulu zendalo, kwaye isuka kolu phawu ukuba ifumana igama layo kwisiGrike somlilo kunye neliso. Ngaphandle kokungaqhelekanga kunamajarnets amaninzi, siselitye eliqhelekileyo elisetyenziswa ngokubanzi elinamagama amaninzi anokubakho, amanye awo angachanekanga. I-pyrope ye-Chrome, kunye ne-bohemian garnet ngamagama amabini athetha enye.
I-pyrope ecocekileyo yi-Mg3Al2 (SiO4) 3, nangona ezinye izinto zibakhona okungenani ubuncinci-ezi zinto zibandakanya iCa, iCr, Fe neM. Eli litye lenza uchungechunge lwesisombululo esiqinileyo kunye ne-almandine kunye spessartine, ezaziwa ngokudibeneyo njengee-pyralsindows garnets: ipyrope, almandine kunye spessartine. Iron kunye manganese endaweni ye-magnesium kwisakhiwo se-stione. Iziphumo, iignets zomdibaniso ezixubeneyo zichazwa ngokwazo ipyrope-almandine umyinge. Ilitye elixabisekileyo rhodolite yi-garnet ye-70% yokubumba kweprope.
Imvelaphi yeyona pyrope ikumatye e-ultramafic, ngokwendlela eqheleke kakhulu kwisambatho soMhlaba: ezi pilisi zithathwe kwim ingubo zinokubhekiswa kuzo zombini iinkqubo ze-igneous kunye ne-metamorphic. Ikwenzeka kwi-Ultrahigh-uxinzelelo metamorphic rock, njengakwi-Dora-Maira massif entshona yeAps. Kweso sizisi, iphantse yacaca ukuba icocekile kwaye yenzeka kwiikristale ukuya kuthi ga kububanzi be-12 cm; Eminye yelo pyrope ine-inclusions ye-coesite, kwaye enye ine-inclusions ye-enstatite kunye ne-sapphirine.
Ipyrope ixhaphake kwi-peridotite xenoliths evela kwimibhobho ye-kimberlite, ezinye zazo zithwele idayimane. Ifunyenwe inxulunyaniswa nedayimane eqhelekileyo enomxholo we-Cr2O3 we-3 ukuya kwi-8%, ethi ibeke i-violet eyahlukileyo kwibala elinombala onsomi, ihlala ine-greenish tinge, kwaye ngenxa yalonto ihlala isetyenziswa njengezimbiwa zesimbiwa se-kimberlite kwiindawo ezinomsebenzi wokhukuliseko. yenza iphini ikhombe imvelaphi yombhobho ubunzima. Ezi ntlobo zaziwa ngokuba zi-chrome-pyrope, okanye i-G9 / G10 garnets.
Ngokombono wesandla, ipirope inobuqili kakhulu ukwahlula kwi-almandine, nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba ibonise iziphoso ezimbalwa kunye ne-inclusions. Ezinye iikhrayitheriya zokuhlulahlula zidweliswe kwitheyibhile ekufuphi. Unonophelo kufuneka luthathwe xa kusetyenziswa ezi zinto njengoko uninzi lolo luhlu lugqityiwe kwisimo esikhulisiweyo sokwakheka, okumiselweyo. Ezinye, ezinje ngobunzulu obuthile obuphezulu, bunokungabi nakuluncedo oluncinci xa kufundwa i-crystal encinci efakwe kwi-matrix yezinye iiminerali zesilika. Kwezi meko, ukudibana kwamaminerali kunye nezinye iimineric ze-mafic kunye ne-ultramafic kunokuba eyona nto ibonakalisa ukuba i-garnet oyifundayo yipirope.
Kwicandelo elincinci le-petrographic, ezona zinto zibalulekileyo zephiramikhi yilezo zabelwana ngazo kunye nezinye iarnets eziqhelekileyo: ukukhululeka okuphezulu kunye ne-isotropy. Ithambekele ekubeni nombala omncinci ngokungqongqo kunezinye iiminerali zesilika kwicandelo elincinci, nangona ipirope ingabonisa umbala obenombala opinki obomvu-bumfusa ngokukhanya komdaka. Ukunqongophala kwe-cleavage, i-euhedral crystal morphology, kunye nemibutho yezimbiwa kufuneka kusetyenziswe ekuchongeni ipyrope phantsi kwemicroscope.
I-garnet garnet evela ePailin, eCambodia
Thenga i-garnet yendalo yemvelo kwivenkile yethu
tags garnet, Kakhulu
I-GEMIC Co., Ltd. / i-GEMIC Laboratory Co., Ltd. © Copyright 2014-2019, Gem.Iziqinisekiso